यस्ताे चमत्कारी विरुवा जुन घरको यो दिशामा लगाउनु भयाे भने धनको कमि कहियै हुदैन ! – Sapana Sanjal
June 8, 2021 314
Sapana Sanjal : यस्ताे चमत्कारी विरुवा जुन घरको यो दिशामा लगाउनु भयाे भने धनको कमि कहियै हुदैन ! हरेक मानिसको भाग्यमा कुनै कुनै माध्यमबाट धन सम्पत्ति कमाउने योग बनिरहेको हुन्छ । योगको आधारमा मानिसले मेहनत गर्छन् र मेहनत अनुसार कसैलाई राम्रो र सजिलो हुन्छ भने कसैलाई क`ष्ट हुन्छ ।
Prevकाँक्रो खानुका यस्ता अपत्यारिला फाइदाहरु, थाहा पाउनु भयाे भने छक्क पर्नुहुनेछ !
Nextगौतम बुद्धका ९ सन्देश, जुन आधुनिक युगका लागी अत्यन्तै उपयोगी छन्